परमेश्‍वरप्रतिको सच्‍चा प्रेम स्वस्फूर्त हुन्छ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
परमेश्‍वरका वचनहरूको कारण सबै मानिसहरू शोधनमा परेका छन्। यदि परमेश्‍वरले देहधारण नगर्नुभएको भए निश्‍चय नै मानवजातिले यस शोधनद्वारा कष्टको आशिष् पाउनेथिएन। अर्को प्रकारले भन्‍नुपर्दा, परमेश्‍वरका वचनहरूको परीक्षा स्वीकार गर्न सक्‍नेहरू सबै धन्यका हुन्। मानिसहरूको अन्तर्निहित क्षमता, तिनीहरूको व्यवहार र परमेश्‍वरप्रतिको तिनीहरूको मनोवृतिको आधारमा, तिनीहरू यस प्रकारको शोधन पाउन योग्यका छैनन्। तिनीहरू परमेश्‍वरद्वारा माथि उठाइएकोले गर्दा नै तिनीहरूले यो आशिष् उपभोग गरेका छन्। मानिसहरूले तिनीहरू परमेश्‍वरको अनुहार हेर्न वा उहाँका वचनहरू सुन्‍न लायक छैनन् भन्‍ने गर्थे। आज, परमेश्‍वरले उठाउनुभएकोले र उहाँको कृपाका कारण नै मानिसहरूले उहाँका वचनहरूको शोधन प्राप्त गरेका छन्। यो आखिरी दिनहरूमा जन्मने प्रत्येक व्यक्तिले पाउने आशिष् हो—के तैँले व्यक्तिगत रूपमा यो अनुभव गरेको छस्? मानिसहरूले कुन पक्षमा दु:ख र प्रतिरोधहरू भोग्‍नुपर्छ भन्‍ने कुरा परमेश्‍वरले पूर्वनिर्धारित गर्नुभएको हुन्छ—यो कुरा मानिसहरूका आफ्नै आवश्यकताहरूमा आधारित छैन। यो स्पष्ट सत्य हो। प्रत्येक विश्‍वासीसँग परमेश्‍वरका वचनहरूको परीक्षा स्विकार्न र उहाँका वचनहरूभित्र दुःख भोग्‍न सक्‍ने क्षमता हुनुपर्छ। के यो तिमीहरूले स्पष्ट रूपमा बुझ्यौ? यसैले तैँले आफूले भोगेका दुःखकष्टको बदलामा आजका आशिष्‌हरू पाएको छस्; परमेश्‍वरका लागि दुःख भोग्दैनस् भने, तैँले उहाँको स्याबासी प्राप्त गर्न सक्दैनस्। तैंले विगतमा गुनासो गरेको हुन सक्छ, तर तैंले जति नै गुनासो गरेको भए पनि, परमेश्‍वरले तेरा ती कुराहरू याद गर्नुहुन्‍न। आजको दिन आएको छ, त्यसैले हिजोका विषयहरूको बारेमा विचार गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन।
केही मानिसहरू भन्छन्, उनीहरूले परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्ने कोसिस त गर्छन्, तर उहाँलाई प्रेम गर्न सक्दैनन्। त्यसपछि, जब तिनीहरूले परमेश्‍वर जान लाग्‍नुभएको छ भन्‍ने सुन्छन् तब अचानक उनीहरूमा उहाँप्रतिको प्रेम देखा पर्छ। कतिपय मानिसहरूले सामान्यतया सत्यताको अभ्यास गर्दैनन्, र जब तिनीहरूले परमेश्‍वर क्रोधित बनेर जान लाग्‍नुभएको छ भन्‍ने सुन्छन्, तब तिनीहरू उहाँको सामु आउँछन् र यसरी प्रार्थना गर्छन्: “हे परमेश्‍वर! कृपया नजानुहोस्। मलाई एउटा मौका दिनुहोस्! हे परमेश्‍वर! मैले विगतमा तपाईंलाई सन्तुष्ट पारेको छैनँ; म तपाईंप्रति ऋणी छु र मैले तपाईंको विरोध गरेको छु। आज म पूर्ण रूपमा मेरो शरीर र हृदय अर्पण गर्न तयार छु ताकि अन्ततः मैले तपाईंलाई सन्तुष्ट पार्न र तपाईंलाई प्रेम गर्न सकूँ। मैले फेरि यो मौका पाउनेछैनँ।” के तैंले यस प्रकारको प्रार्थना गरेको छस्? जब कसैले यस प्रकारले प्रार्थना गर्छ भने उसको विवेक परमेश्‍वरका वचनहरूद्वारा जागृत भएको हुन्छ। मानिसहरू बोधो र मन्द बुद्धिका छन्। तिनीहरूलाई आफू सजाय र शोधनमा पर्दा पनि परमेश्‍वरले यसद्वारा के कुरा हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भन्‍ने थाहै हुँदैन। यदि परमेश्‍वरले यस प्रकारले काम नगर्नुभएको भए, मानिसहरू अझै पनि भ्रमित नै रहनेथिए; कुनै पनि मानिसले मानिसहरूको हृदयमा आत्मिक भावनाहरू जगाउन सक्दैन। मानिसहरूको न्याय गर्ने र तिनीहरूलाई खुलासा गर्ने परमेश्‍वरका वचनहरूले मात्र त्यस्तो फल फलाउन सक्छ। यसैले यी सबै कुराहरू परमेश्‍वरका वचनहरूको कारणले मात्र प्राप्त र पूरा हुन्छन्, र उहाँका वचनहरूको कारणले मात्र परमेश्‍वरप्रतिको मानवजातिको प्रेम जागेको छ। मानिसको विवेकमा आधारित परमेश्‍वरप्रतिको प्रेमले मात्र चाहेको परिणाम हासिल गर्नेछैन। के विगतमा मानिसहरूले परमेश्‍वरप्रतिको आफ्नो प्रेमलाई विवेकमा आधारित गरेका छैनन् र? के आफ्नै पहलमा परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्ने एक जना पनि थियो त? परमेश्‍वरका वचनहरूबाट प्रोत्साहन पाएर मात्र मानिसहरूले परमेश्‍वरलाई प्रेम गरेका छन्। कतिपय मानिसहरू भन्छन्: “मैले धेरै वर्षदेखि परमेश्‍वरलाई पछ्याएको छु र उहाँको धेरै अनुग्रह, धेरै आशिष्‌ उपभोग गरेको छु। मैले उहाँका वचनहरूबाट शोधन र न्याय भोगेको छु। यसैले मैले धेरै कुरा बुझेको छु र मैले परमेश्‍वरको प्रेम देखेको छु। मैले उहाँलाई धन्यवाद दिनैपर्छ, मैले उहाँको अनुग्रहको ऋण तिर्नैपर्छ। म मृत्युद्वारा परमेश्‍वरलाई सन्तुष्ट पार्नेछु, र उहाँप्रतिको मेरो प्रेमलाई मेरो विवेकमा आधारित गर्नेछु।” यदि मानिसहरूले उनीहरूको विवेकका भावनाहरू मात्र सुन्छन् भने, तिनीहरूले परमेश्‍वरको प्रेमिलोपन महसुस गर्न सक्दैनन्। यदि तिनीहरू पूर्णतया आफ्नै विवेकमा मात्रै भर पर्छन् भने, परमेश्‍वरप्रतिको तिनीहरूको प्रेम कमजोर हुनेछ। यदि तँ परमेश्‍वरको अनुग्रह र प्रेमको ऋण तिर्ने कुरा मात्र गर्छस् भने, उहाँप्रतिको तेरो प्रेममा तँसित कुनै प्रेरणा हुनेछैन; आफ्नो विवेकका भावनाहरूमा आधारित रही उहाँलाई प्रेम गर्नु एक निष्क्रिय तरिका हो। म किन यो एक निष्क्रिय तरिका हो भनी भन्छु त? यो एक व्यावहारिक विषय हो। परमेश्‍वरप्रतिको तिमीहरूको प्रेम कस्तो किसिमको प्रेम हो? के यो परमेश्‍वरलाई मूर्ख बनाउनु र उहाँका निम्ति झारा टार्नु होइन र? धेरै मानिसहरू के विश्‍वास गर्छन् भने, परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्नुमा कुनै इनाम छैन र उहाँलाई प्रेम गर्नेले पनि उहाँलाई प्रेम नगर्नेले जस्तै दण्ड पाउनेछ, त्यसपछि त समग्रमा पाप नगर्नु नै पर्याप्त हुन्‍छ। त्यसैले आफ्नो विवेकका अनुभूतिहरूका आधारमा परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्नु र उहाँको प्रेमको ऋण तिर्नु भनेको एक निष्क्रिय तरिका हो, र यो व्यक्तिको हृदयबाट स्वस्फूर्त रूपमा आउने परमेश्‍वरप्रतिको प्रेम होइन। परमेश्‍वरप्रतिको प्रेम व्यक्तिको हृदयको गहिराइबाट निस्केको सच्‍चा भावना हुनुपर्छ। कतिपय मानिसहरू भन्छन्‌: “म आफै परमेश्‍वरलाई खोज्न र उहाँको पछि लाग्‍न इच्छुक छु। अहिले परमेश्‍वरले मलाई त्याग्‍न चाहनुहुन्छ भने पनि, म उहाँलाई पछ्याइरहनेछु। उहाँले मलाई चाहनुभए पनि नचाहनुभए पनि, म उहाँलाई प्रेम गरिरहनेछु, र आखिरमा मैले उहाँलाई प्राप्त गर्नैपर्छ। म मेरो हृदय परमेश्‍वरमा अर्पण गर्छु, र उहाँले जे गर्नुभए नि, म आजीवन उहाँलाई पछ्याउनेछु। जेसुकै भए पनि, मैले परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्नैपर्छ र मैले उहाँलाई प्राप्त गर्नैपर्छ; जबसम्म म उहाँलाई प्राप्त गर्दिनँ तबसम्म म विश्राम लिनेछैनँ।” के तँसँग यस प्रकारको संकल्प छ?
जब कुनै व्यक्तिले आफू परमेश्‍वरप्रति ऋणी छु भन्‍ने महसुस गर्न सक्छ, त्यो पवित्र आत्माद्वारा छोइएकोले गर्दा नै हो; जसले यस्तो महसुस गर्छन् तिनीहरूमा तिर्सना गर्ने हृदय हुन्छ र तिनीहरूले जीवन प्रवेशको खोजी गर्न सक्छन्। तर यदि तँ निश्‍चित कदममा रोकिन्छस् भने, तँ गहिराइमा जान सक्‍नेछैनस्; तँ अझै पनि शैतानको जालमा फस्‍ने खतरा हुन्छ, र कुनै मोडमा शैतानले तँलाई बन्दी बनाउनेछ। परमेश्‍वरको प्रकाशले मानिसहरूलाई आफैलाई चिन्‍ने तुल्याउँछ र त्यसपछि परमेश्‍वरप्रति आफू ऋणी भएको महसुस गर्ने बनाउँछ; तिनीहरू उहाँसँग सहकार्य गर्न इच्छुक हुन्छन् र उहाँलाई मननपर्ने कुराहरू त्याग्‍न इच्छुक हुन्छन्। परमेश्‍वरको कामको सिद्धान्त यही हो। तिमीहरू सबै आफ्नो जीवनमा बढ्न र परमेश्‍वरप्रतिको प्रेमको पछि लाग्‍न इच्छुक छौ, के त्यसो भए तैंले आफैलाई सतही मार्गबाट अलग गरेको छस् त? यदि तैँले केवल आफैलाई सतही मार्गहरूबाट अलग गरेको छस् र तँ विघटनकारी र अहङ्कारपूर्ण व्यवहारबाट अलग बस्छस् भने, के त्यो साँच्‍चै नै तैँले आफ्नो जीवनको वृद्धि खोजेको अवस्था हो त? यदि तैँले आफूलाई सबै सतही व्यवहारबाट मुक्त गर्छस् तर तँ परमेश्‍वरका वचनहरूमा प्रवेश गर्दैनस् भने, त्यसले तैंले सक्रियतासाथ प्रगति गरिरहेको छैनस् भन्‍ने देखाउँछ। सतही व्यवहारको मूल कारण के हो? के तेरा कार्यहरू तेरो जीवनमा वृद्धि हुनका लागि हुन्? के तँ परमेश्‍वरका मानिसहरूमध्ये एक बन्‍ने प्रयास गर्न खोज्दैछस्? तैंले जुन कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्छस्, तँ त्यसैअनुसार जिउनेछस्; यदि तँ सतही व्यवहारमा केन्द्रित हुन्छस् भने, तेरो हृदय प्रायः बाहिर फ्याँकिन्छ र तँसँग आफ्नो जीवनमा वृद्धि हुने खोजी गर्न कुनै मार्ग हुनेछैन। परमेश्‍वर स्वभावको परिवर्तन चाहनुहुन्छ, तर तँ सधैँ बाहिरी कुराहरूको पछि लाग्छस्; यस प्रकारको व्यक्तिले आफ्‍नो स्वभाव परिवर्तन गर्न सक्दैन! जीवनको परिपक्‍वतामा पुग्‍ने प्रक्रियामा, हरेक व्यक्तिले एउटा मार्ग पछ्याउनुपर्छ: तिनीहरूले परमेश्‍वरका वचनहरूको न्याय, सजाय र सिद्धतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। यदि तँसँग परमेश्‍वरका वचनहरू छैनन् र तँ आफ्नै आत्मविश्‍वास र इच्छामा मात्र निर्भर हुन्छस् भने, तैंले गर्ने सबै कुरा जोसमा मात्र आधारित हुन्छ। भन्‍नुको अर्थ, यदि तँ आफ्नो जीवनमा वृद्धि चाहन्छस् भने तैंले परमेश्‍वरका वचनहरू अझ बढी खानु, पिउनु र बुझ्नुपर्छ। उहाँका वचनहरूद्वारा सिद्ध पारिनेहरू सबै ती वचनहरूमा जिउन सक्छन्; उहाँका वचनहरूको शोधन नभोग्‍नेहरू, उहाँका वचनहरूको न्यायबाट नगुज्रनेहरू, उहाँको प्रयोगका निम्ति योग्य हुन सक्दैनन्। यसकारण, तँ कुन हदसम्म उहाँका वचनहरूमा जिउँछस्? तैंले परमेश्‍वरका वचनहरू खाइस् र पिइस् भने र ती वचनहरूलाई तेरो जीवनको अवस्थासँग तुलना गर्न सकिस् भने मात्र, र मैले अघि उठाएका विषयहरूको आधारमा अभ्यास गर्ने बाटो प्राप्त गर्न सकिस् भने मात्र, तेरो अभ्यास सही र परमेश्‍वरको इच्छाअनुरूप हुनेछ। यस प्रकारको अभ्यास गर्ने व्यक्तिमा मात्र परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्ने इच्छा हुन्छ।